विवादित राजदूत लक्कीलाई सरकारको सन्देश : बर्खास्त हुनुभन्दा राजीनामा दिनू | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ३ पुष २०७५, मंगलवार २१:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । मानव तस्करीको आरोप लागेर विवादमा मुछिएकी अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पालाई सरकारले राजीनामा दिने विकल्प दिएको छ ।
बर्खास्तको निर्णय गरेर राजदूतबाट फिर्ता बोलाउँदा भविष्यमा समेत दाग लाग्ने भएकाले यथाशीघ्र राजीनामाको विकल्प रोज्न सरकारको सन्देश छ । गम्भीर विवादमा मुछिएपछि शेर्पालाई राजदूतको जिम्मेवारीमा राखिराख्नु उचित नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले शेर्पालाई राजीनामा दिने विकल्प सुझाउन आग्रह गरिसकेका छन् । ज्ञवालीले प्रचण्डले भनेकै व्यक्तिलाई एक सातामै सोही ठाउंमा राजदूत पठाउने आश्वासन समेत दिएको बताईन्छ ।
पूर्वसवारी चालक वाङ्छु शेर्पाले मानव ओसारपसारको आरोप लगाएपछि राजदूत शेर्पा विवादमा आएकी हुन् । आफूबाट लाखौं रुपैयाँ लिएको र पत्नीलाई उल्टै फसाएको भन्दै वाङ्छुले सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक अपिल गरेका थिए । विवादमा मुछिएकाले राजीनामा दिएर जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने विकल्प सरकारले खुला गरेको छ ।
केही दिनअघि सरकारले राजदूत शेर्पालाई अस्ट्रेलियाबाट फिर्ता बोलाएको थियो । विवादमा मुछिएपछि राजदूत शेर्पामाथि छानबिन समेत चलिरहेको छ । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपस्थित भएर आरोपबारे स्पष्टीकरण पनि दिएकी छन् ।
विवादमा मुछिएपछि नेकपाका नेता, नेपाली कांग्रेस पार्टी लगायतले राजदूत शेर्पामाथि छानबिन र कारवाही गर्न माग गरेका थिए । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । छानबिन समितिमा सहसचिव मणि भट्टराई, दिपक अधिकारी र तपस अधिकारी छन् ।
स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआएको र विवादमा मुछिएपछि राजदूतमा कायमै राखिराख्न उचित नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले उनी अमेरिकाबाट फर्किंदासम्म राजीनामा दिन राजदूत शेर्पालाई भनिएको छ । अमेरिका भ्रमणबाट मन्त्री ज्ञवाली पुस ६ गते शुक्रबार फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।
अस्ट्रेलियाबाट काठमाडौं झिकाइएको दिनदेखि नै राजदूत शेर्पाले शक्तिकेन्द्र धाउन थालेकी छन् । आफूमाथि हुन सक्ने सम्भावित कारवाही रोक्न शेर्पाले कोसिस गरिरहेकी छन् । तर उनको कोसिसले सार्थकता पाउन सकेको देखिँदैन ।
आफूमाथि कारवाही हुन लागेको भन्दै आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न राजदूत लक्कीले शेर्पा संघ लगायत जातीय संघसंगठनमा पनि गुहार मागेकी छन् । तर जातीय संघसंगठनले समेत गल्ती देखिएकाले सरकारमै स्पष्टीकरण दिन भनेका छन् । एउटा शेर्पाको छोराले नै ठगिएको भनेर आरोप लगाएको अवस्थाले संघसंगठनले पनि राजदूत शेर्पालाई शंकास्पद नजरले हेरेका छन् ।
राजदूत शेर्पाले बच्ने प्रयास गरेपनि उनीमाथि कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष नेकपा र सरकारभित्र बलियो रहेको देखिएको छ । नेकपाका कतिपय नेताहरू खुलेरै राजदूतको विरोधमा उत्रिएका छन् । राजदूत भएर विदेशमा देशकै बद्नाम गर्ने काम गरेकाले तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने नेकपाकै नेताहरूले माग गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति विवादरहित हुनुपर्ने भएकाले सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाउने मुड बनाएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर राजदूत शेर्पालाई फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सक्रिय भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच समेत शेर्पालाई फिर्ता बोलाउने विषयमा सहमति भइसकेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । फिर्ता बोलाउनुअघि राजीनामा दिन सकिने उपाय शेर्पालाई दिइएको छ ।
त्यसपछि वाङ्छु शेर्पालाई पनि दूतावासमै काम गराउने गरी अस्ट्रेलिया लैजाने सहमति भयो । शेर्पाले दूतावासमै चालकको काम गरे । राजदूत भएपछि शेर्पाले चर्काे रकम लिएर नेपालीलाई अस्ट्रेलिया पठाउने धन्दा शुरू गरेको वाङ्छु शेर्पाको आरोप छ ।
आफूले दिएको पैसा वाङ्छु शेर्पाले फिर्ता माग्न थालेपछि राजदूत दम्पतीले चोरीको आरोप लगाएको र शेर्पाकी पत्नीलाई मुद्दा लगाएर थुनामा पठाएको पीडित शेर्पाको दाबी छ । वाङ्छु शेर्पाकी पत्नी अहिले पनि प्रहरीको थुनामै रहेकी छन् ।
राजदूतको चक्करमा परेर वाङ्छु शेर्पा परिवार अहिले नराम्ररी फसेको तथा शक्ति र पैसाको आँडमा राजदूत दम्पतीले मनपरी गरिरहेको दाबी गरिएको छ । राजदूत शेर्पाले आफूजस्तै अरुलाई पनि फसाउने गरेको वाङ्छुले आरोप लगाएका छन् ।
गाई काटेर मासु खानेलाई कारबाही नगर्न माओवादी अध्यक्ष वैद्यको दवाव
काठमाडौं । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले घुमाउरो भाषामा गाईलाई काटेर मासु खानेकार्यलाई समर्थन गरेको छ ।
जनकपुर । प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने विवाह पञ्चमी पर्व आज श्रीरामचन्द्र र सीताको पूजा आराधना गरी…
साहित्यकार दीक्षितको अन्त्येष्टि
काठमाडौं । राष्ट्रिय सम्मानका साथ वरिष्ठ साहित्यकार स्व. मदनमणि दीक्षितको पशुपति आर्यघाटमा बिहीबार अपराह्न अन्त्येष्टि गरिएको छ ।
बाजेको सेकुवाका शाखाहरु तत्काल खोल्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुन तस्करीको पैसा रेस्टुरेन्टमा लगानी गरेको आशंकामा शिलबन्दी गरिएका बाजेको सेकुवाका शाखाहरु तत्काल खोल्न अन्तरिम आदेश…
कांग्रेससहित ६ दलले प्रदेश समानुपातिक सूची नियम विपरित बुझाएको ठहर, तीन दिनभित्र सच्याउन आयोगको चेतावनी !
काठमाडौं । समानुपातिकतर्फको सूचि निर्वाचन आयोगलाई बुझाउँदा दलहरुले नियम उल्लङ्घन गरेको…